tayada hawada gudaha - Beijing Holtop Hawada Co., Ltd.
Waa maxay Tayada Hawada Gudaha?
"Tayada hawada gudaha," ama IAQ, waa mawduuc cusub ee badbaadada deegaanka. Iyada oo aad u badan oo dareenka ayaa la saarayaa wasakhda dibadda ka badan labaatankii sano ee la soo dhaafay, diiradda on tayada hawada gudaha waxaa kaliya laga bilaabo. tayada hawada guri ee inta badan leeyahay inuu sameeyo leh xaddiga sunta ah gudaha, laakiin waxa uu sidoo kale go'aamiyaa heer qoyaan iyo hawo. Hay'adda Ilaalinta Bey'adda Mareykanka ayaa lagu ogaaday in ay isugu soo urureen oo ah sunta waxay noqon kartaa ilaa 100 jeer ka badan gudaha dibadda. Lung Association American ayaa ku qiyaastay in dadka intooda badan ku qaataan 90% ka mid ah ay wakhti gudaha, hawada gudaha si nadiif ah waa mid aad u muhiim ah.
Maxaa sababa wasaqowga hawada gudaha?
Sida laga soo xigtay Hay'adda Ilaalinta Bey'adda Mareykanka, waxyaabaha gudaha guriga in sii daayo gaaska waa sababta ugu weyn ee dhibaatooyinka hawada gudaha. Liiska waxa ku jira roogaga, farnijarka, qalabka gaaska, rinjiga iyo qase, alaabta wax lagu nadiifiyo, fresheners hawada, dhar qalalan-nadiifiyaa iyo cayayaanka. Haddii aad qabto garaash ku lifaaqan, qiiqa ka shidaal, saliidda iyo qabow ka hor taga in aad gaariga ka heli kartaa oo ay maraan jidkii hawada gurigaaga ee. kiimikada adag ayaa sidoo kale ka imaan karaan qiiqa sigaarka iyo qoryaha.
hawo aan ku filnayn ka sii dari kartaa dhibaato sababtoo ah sunta ah aad gudaha ku xayiran. Xidh laga shaabadeeyey laba iyo guryaha si fiican-dahaaran hay hawada dibadda jilicsanaan, kaas oo lagu milo kartaa sunta ah. heer kulka iyo huurka badan ayaa sidoo kale kordhin kartaa caddad sunta qaar ka mid ah.
Waa maxay alaabta tayada hawada gudaha ugu fiican?
teknoolajiyada badan oo maanta la heli karo la dagaalanka keliya hal ama labo fasal oo ah sunta hawada. Holtop KQA nidaamka saabsanaa isdaahirinta, hawo cusub waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo saddex dhan isku daahirin lahaayeen hawada dhamaystiran. Waa ma aha oo kaliya keeni kartaa hawo cusub oo nadiif ah si ay indoor, hardiyi baxay hawada duugowday, laakiin sidoo kale yareeyo kharashka hawo marka socda nidaamka qaboojinta.
Sidee baan ku ogaan oo indoor alaabta tayada hawada igu habboon?
Waxaad la xiriiri kartaa kooxda iibka Holtop si aad u hesho wax soo saarka ugu fiican adiga iyo qoyskaaga. Natiijooyinka waxay ku saleysan yihiin arrimaha aad aqoonsado sida dhibaatooyinka ka jira guriga. Waxaad kaloo la xiriiri kartaa dealer HOLTOP maxaliga ah si ay u qiimeeyaan gurigaaga iyo habka raaxada indoor.
Maxaan anigu samayn karaa si kor loogu qaado tayada hawada gurigeyga ee?
Waxaa jira tallaabooyin dhowr ah maalin kasta oo aad qaadi karto si aad u yarayso sunta ku wareegaya hawada gurigaaga ee, ay ka mid yihiin:
Store guriga lagu nadiifiyo, qase rinjiga iyo waxyaabaha kiimikada weel si adag u xidh shaabadeeyey. Haddii ay suurtagal tahay, dibadda u sii.
Nadiifi oo vacuum ugu yaraan hal mar toddobaadkii.
Si joogta u dhaq gogosha sariirta iyo alaabta lagu cabudhiyay.
Ka dhig daaqado cidhiidhi ah marka manka, wasakhda iyo heer qoyaan sare.
Weydii dealer HOLTOP maxaliga ah inaad baadho oo aad u nadiifiso nidaamka kululaynta iyo qaboojinta gurigaaga ee.
Hubi in aad gurigaaga si fiican loo hawo. (Guryaha casriga ah waxaa sidoo kale ku dahaaran oo la shaabadeeyey inay ku keydsadaan tamarta, taas oo macnaheedu yahay sunta hawada lahayn hab ay ku baxsadaan).
Ka dhig heerka qoyaan gudahood caafimaad, kala duwan oo raaxo leh si looga hortago in koritaanka of caaryada iyo caariyaysi (30% - 60%).
Iska ilaali inaad isticmaashid deodorizers carafta leh iyo fresheners hawada ur-shareeraysaa, taas waxay keeni kartaa kiimikooyin sun ah.
Dooro alaabta in dhaadheer lacagta ugu yar ee suuragalka ah ee uumi kiimikada.
Ha u ogolaan in sigaar gudaha gurigaaga iyo in la hubiyo qalabka gaaska oo dhan si fiican loo kala duldhacay.